Salaadda San Roque.? Awliyo waqtiyada masiibada.
Ducada San Roque Waa hub awood badan u leh dhammaan kuwa u baahan faragelinta rabbaaniga ah xaaladaha qaarkood ee ka soo bixi kara nolosha, ha ahaato toos ama si aan toos ahayn.
Awoodda ee salaadda waa wax aan la soo koobi karin, iyaga ayaynu ku guuleysan karnaa guulo haddii kale suurtagal ahayn in la guuleysto.
Shuruudda kaliya ee tukashada si loo hirgaliyo ay tahay in lagu sameeyo iimaan, si fudud uma weydiisan karno, laakiin waxaan ku sameyneynaa adigoo qalbiga ka rumeynaya, si qumman oo aamin ah oo jawaabta aan wax badan ku weydiinayno waa la siin doonaa.
San Roque oo ah daryeele aamin ah oo dadka u baahan ayaa fahmi kara silicayaga lacala haddii ay dhacdo xanuun kasta.
Aan u isticmaalno aaladdan oo aan u duceyno in mucjisooyinkaas aan ubaahanahay in badan nala siiyo waqtiga ugu qumman ee Ilaaha Aabbaha abuuray.
1 Ducada San Roque Waa kuma San Roque?
1.1 Ducada San Roque oo ah xoolaha xoolaha (lumay)
1.2 Ducada San Roque eeyaha ee jiran
3 Quduusani ma xoog baa?
Ducada San Roque Waa kuma San Roque?
Sheekadu waxay sheegaysaa inuu yahay wiilka gudoomiyaha Montepellier wuxuuna ku dhashay 1378. Noloshu caadi bay ahayd markuu jiray 20, waalidkiis waa dhinteen.
Isagoo aha agoon yar, Roque wuxuu u heellan yahay xanaanaynta bukaanka mid ka mid ah cayayaanka ugu naxdinta badneyd waqtigaas.
Sheekadu waxay sheegaysaa xaqiiqada ah, markii uu daryeelayay bukaannadan, inay jireen kuwo badan oo helay bogsasho dhammaystiran oo mucjiso ah markii San Roque ka dhigay iskutallaabta wejiga.
Tani maahan wax la yaab leh tan iyo markii buugaagta xurmada leh aan ku aragno in bogsiinta lagu gudbi karo xitaa hadhka, sida ku dhacday the rasuul Butros.
Sidaa daraadeed xaqiiqda ah in qofku uu ku bogsado bogsashada leh calaamada iskutallaabta oo keliya waa ficil aan rumeysan karno inay tahay mucjiso si toos ah uga timaada xagga Ilaah.
Maalintiisa waxaa loo dabaaldegaa Agoosto 16keeda.
Ducada San Roque oo ah xoolaha xoolaha (lumay)
Naxariis badan Saint Roque,
wanaagsan, naxariis iyo mucjiso mucjiso ah,
in aad naftaada iyo naftaada siisay Aabeheenna Ilaaheenna
oo xayawaannadaad ka jeclaatay qalbiga
oo sidaas daraaddeed waxaad tahay magiciisa sharaftiisa.
Ha uga tagin caawimaad la'aan markay u baahan yihiin
Ha u oggolaan inay dareemaan caawimaad la'aan markii ay dhibaataysanaadaan
oo waxaad siisaa wax kasta oo ay ugu baahan yihiin noloshooda.
U ducee Rabbiga fadliga iyo barakada Franchesca
oo ku hay noloshiisa oo dhan ilaalintaaga iyo hayntaada.
Waxay xubin ka tahay qoyska kale,
Iyadu waa saaxiibkay iyo saaxiibkay,
Waa isaga kan jacaylkiisa si shuruud la’aan ah iigu siiya,
Isagu waa aamin, wuuna i qalbi qaboojiyaa, cimrigaygana wuu ka farxiyaa
oo waxay i siisaa wax ka badan waxa ay helaan.
Saint Roque, gacaliyayaalow, addoonka Rabbiga,
in uu mucjiso ku caawiyay eey yar
markay dadku kaa tegeen cudurkaaga darteed,
Wuxuu aaminnimo kuugu keenay duub maalin kasta
iyo jacayl jacayl ah oo nabrahaaga u xannuun si ay xanuunkaaga u yareeyo
oo markaa adigu waxaad tahay ilaaliyaha xayawaannada
Maanta waxaan kuugu imid kalsooni buuxda
iyo ogaashada inaad tahay qof wanaagsan oo naxariis leh
Waxaan kugu aaminay xayawaankeyga Franchesca.
Mucjisooyinka San Roque, difaaca xayawaannada oo dhan,
Maanta waxaan kuu imid inaad i caawiso murugadayda,
adeegso xooggaaga dhexdhexaadinta Ilaah hortiisa
si uu iigu naxariisto
Waxa aan qalbigayga ka weyddiistay xayawaankayga:
Ka ilaali iyada si ay had iyo jeer u faraxsan tahay,
ilaali gacaliyahayga Franchesca
in uusan haysan cunno, sariir, shirkad, iyo cayaar la'aan.
Ka ilaali xumaanta oo dhan, kana fog waxyeellada iyo xaalad kastoo xun;
Weligaa ha murugoon ama ha dareemin in lagaa tegay
waligaa ha ka maqnaanin jacayl, daryeel iyo saaxiibtinimo
si uusan waligiis u dareemin cabsi, cabsi, ama kalinimo,
markasta laguula dhaqmo si xushmad iyo xushmad leh
inay ku noolaadaan farxad iyo wanaag buuxa
oo yeeshaan nolol dheer oo farxad leh.
Waxaan ku weydiinayaa, inaad barakaysan tahay Saint Roque caafimaadkaaga,
ka fog cudurada Franchesca,
samooyinka laga soo diro bogsiiyo,
Kalsooni weyn iyo aaminaad, ayaan gacantayda kugu ridayaa,
isaga ugu dhakhsaha badan isaga dib u soo celi xooggiisa iyo tamartiisa
si uusan mar dambe u silcin
ha u ogolaan inuu xanuunsado ama xanuun dareemo,
Wuxuu kaa caawiyaa xanuunkaaga, wuxuu bogsadaa nabarradaada ama jirradaada.
Waan ka mahadcelinayaa kaalmadaada xilliyadan adag,
Waan ogahay inaadan joojin doonin ilaalinta iyo daryeelka Franchesca
iyo inaad baryootankayga xagga Rabbiga weyddiiso,
oo abuuray dhamaan noolaha nool oo kunool meeraha
iyo jacayl iyo naxariis, wuxuu ilaaliyaa oo u kuurgalaa dhamaan waxa abuuran oo dhan.
Waa hoggaanka cudurada ay ku dhacaan lo'da, eeyaha, dadka naafada ah, cudurada faafa iyo dhibaatooyin kale marka loo eego caafimaadka dadka iyo xoolaha.
Kaniisadda kaatooligga waxay u qaabeeysay duco ama tusaale duco ah oo ku habboon xaaladahaas oo ay xayawaanku silicayaan una baahan mucjiso rabaani ah oo ah bogsashada.
Si loo sameeyo tukashadan ma ahan muhiim inaad diyaarisid jawiga, in kasta oo aad shidin karto shumacyo ama waxaad meel allabari gaar ah ugu samayn kartaa karaamadan.
Adiga kaligaa waad tukan kartaa ama qoys ahaan, waxa lama huraanka ah oo ay tahay in markasta la ilaaliyo waa iimaan.
Ducada San Roque eeyaha ee jiran
Quduus, cibaado badan, oo caawiyay bukaanno badan oo cudurka daacuunka ah, Saint Roque, oo, mahadi u leh naxariista Eebbe, waxay ka shaqeeysay mucjisooyin, kuwaas oo ay ku rumaysteen awooddaada bogsiinta ...
Waxaan kaa baryayaa, is-hoosaysiin daacad ah, iga caawi si eeygayga iyo saaxiibkayga aaminka ah, ______, looga badbaado cudurka, oo isaga si weyn u daciifiyay, u dhigay, u sarreeyaa oo u nugul xasaasiga ah ...
San Roque, inaad aad u jeceshahay eeyaha, in eeygu bogsado oo ay markale u muuqato sidii qof waligii faraxsan.
Eeydu sidoo kale waa uunka Ilaahay waxayna mudan yihiin tixgelin iyo daryeel.
Waqti markii xayawaankeena xayawaanku uu marayaan waqti adag oo caafimaad ah waxaan kor ugu qaadi karnaa San Sanque duco si aan u daryeelo xayawaanka oo aan u siinno mucjisooyinka bogsashada.
Waxaan kaloo waydiin karnaa xayawaanada xanuunsan dariiqyada si mucjisadan mucjisada leh ee mucjisada ah ay u siiso caafimaadka iyo daryeelka ay u baahan yihiin.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu tukado waa dareento baahida loo qabo in la sameeyo.
Ereyga Eebbe wuxuu nagala hadlayaa tukashada wuxuuna noo sheegayaa in, markasta oo aan caawimaad u baahanahay, Aabaha jannada uu had iyo jeer diyaar u yahay inuu dhageysto salaaddayada.
Markaa waan fahmi karnaa in aanu jirin jadwal cayiman inkasta oo qaarkood ay kugula talinayaan sidaas. aroortiina iyo shirkada reerkaRuntu waxay tahay in lagu qaban karo wakhti kasta iyo goob kasta.
Haa, maxaa yeelay markii uu noolaa isaga laftiisu waxa uu ku dhacay isla daacuunka sidii kuwii uu daryeelayay wax yar kadibna waxa uu helay bogsasho isla markaana waxa uu sii waday daryeelida bukaanno badan oo cusbitaalo kala duwan ah.
Tan iyo markaas iyo ilaa maanta wuxuu rumeysan yahay xooggiisa mucjisada ah inuu caawiyo kuwa yar.
U soo ducee ducada San Roque oo ah xoolahii lumay iyo kuwa buka ee iimaanka weyn leh.
Sidoo kale u ducee tukashadan adag
Salaad aad u xoog badan oo loo diro Saint Michael Mikaa'iil
Salaadda San Alejo maalin kasta